'Umbono' kaMongameli uTrump woXolo oluPhakathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » 'Umbono' kaMongameli uTrump woXolo oluPhakathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • IPalestine Breaking News • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
by Umgca weendaba
Ibhalwe ngu Umgca weendaba
Ngelixa i-Israel yamkele uthethathethwano ngokusekwe kwisindululo, iGunya lasePalestine lisalile ngokusemthethweni isikhokelo
Umongameli wase-US u-Donald Trump ngolwe-Lwesibini watyhila isicwangciso sakhe soxolo sase-Middle East esasilibaziseke ixesha elide, esicinga ukuba u-Israyeli ugcina ubukhosi kwi-Jerusalem engacacanga kunye nokusetyenziswa kwayo kwi-West Bank. Esi sicwangciso, ngexa sasifuna ukuba kudaleke ilizwe lasePalestine elizimeleyo, eli lixesha lokuchithwa kwezixhobo zeHamas, ezilawula iGaza Strip, kunye nokwamkelwa kuka-Israyeli njengorhulumente wesizwe samaJuda.
UMongameli uTrump, ephahlwe yiNkulumbuso yase-Israel u-Binyamin Netanyahu, usincoma esi siphakamiso "njengesona sicwangciso sinobuzaza, siyinyani kwaye sineenkcukacha esakha sachazwa, esinokwenza ama-Israyeli, amaPalestina kunye nommandla ukhuseleke kwaye ube nempumelelo."
Uqinisekisile ukuba "namhlanje u-Israyeli uthatha inyathelo elikhulu loxolo," ngelixa egxininisa ukuba "uxolo lufuna ukulalanisa kodwa ngekhe sivumele ukhuseleko luka-Israyeli lubandakanywe."
Phakathi kobudlelwane obunzima kunye neGunya lasePalestine, uMongameli uTrump wandise isebe lomnquma, evakalisa ukudana ngokuqonda kwakhe ukuba abantu basePalestine "babanjwe kumjikelo wobundlobongela ixesha elide." Ngaphandle kokugxekwa kaninzi yi-PA ngesindululo sobhedu lwayo olungaphezulu alubonanga, uMongameli uTrump wanyanzelisa ukuba uxwebhu olukhulu lunika "ithuba lokuphumelela" elinikezela "izisombululo ezichanekileyo zobuchwephesha" zokuphelisa ungquzulwano.
Kule meko, isicwangciso ngokwaso sifuna "ukugcinwa koxanduva lokhuselo lakwa-Israeli [kwilizwe elizayo lasePalestine] kunye nolawulo lakwa-Israeli kwindawo yomoya entshona yoMlambo iJordani."
Isindululo sicebisa ukuba, "inika amaPalestina lonke igunya lokuzilawula kodwa ingabaniki mandla okugrogrisa u-Israyeli."
Kwelakhe icala, uNetanyahu wafunga wathi "uza kuthetha-thethana ngoxolo nabantu basePalestine ngokwesiseko soxolo lwakho [lukaMongameli Trump]." Oku, ngaphandle kwenkokeli yakwa-Israeli ijongane nokuhlaselwa okunamandla koogxa bayo bezopolitiko abanqabileyo abalahla ngokuqatha, ngokomgaqo, umbono woburhulumente basePalestine.
"Wena [Mongameli uTrump] uyinkokheli yokuqala yase-US ukuqaphela ukubaluleka kweendawo e-Yudeya nase-Samariya [amagama ebhayibhile ngeendawo ezibandakanya i-West Bank] abalulekileyo kukhuseleko lwesizwe lakwa-Israyeli," wongeze watsho uNetanyahu.
Ngokukodwa, uqaqambise ukuba icebo loxolo lifuna ukuba kusetyenziswe ubukhosi bakwa-Israyeli "kubo bonke" uluntu lwamaJuda kwi-West Bank, nakwicebo lase-Jordan Valley, elijongwa njengeziko lakwa-Israyeli kwezopolitiko nakwezokhuselo njengebalulekileyo ekuqinisekiseni ukhuseleko lwexesha elide kwilizwe.
Isicwangciso soxolo uqobo "sijonga ilizwe lasePalestine eliquka umhlaba othelekiswa ngokulinganayo nomhlaba weWest Bank kunye neGaza ngaphambi kuka-1967."
Oko kukuthi, ngaphambi kokuthimba kuka-Israyeli loo mimandla isuka eJordani nase-Egypt ngokulandelelana.
UNetanyahu akashiyanga ndawo yokutolika xa ebhengeza ukuba iKhabinethi iza kuvota ngeCawe ekuthabatheni zonke "indawo ezithi [uxolo] zichongwe njengenxalenye yakwa-Israyeli nalapho i-United States ivumile ukuba iyamkele njengenxalenye yakwa-Israyeli."
Inkulumbuso yakwa-Israeli ikwagxininisile ukuba esi sicwangciso sifuna ukuba ingxaki yababaleki basePalestina isonjululwe ngaphandle kuka-Israyeli, kunye nesibhengezo esithi "iJerusalem izakuhlala iyinkunzi emanyeneyo yakwa-Israyeli."
Nangona kunjalo, icebo loxolo linombono njengekomkhulu elizayo lelizwe lasePalestine “icandelo leMpuma Yerusalem ebekwe kuyo yonke imimandla esempuma nasentla yomda okhoyo okhuseleko, kubandakanya uKafr Aqab, indawo esempuma yeShuafat kunye neAbu Dis, kwaye unokuthiywa ngegama IAl Quds okanye elinye igama elimiselwe nguRhulumente wasePalestine. ”
Ngapha koko, isindululo sibandakanya imephu echaza umda ogcweleyo phakathi kuka-Israyeli kunye nelizwe lasePalestine. Ngelixa uMongameli uTrump wafunga ukuba iindawo ezabelwe i-PA zizakuhlala "zingaphuhliswanga," ethintela u-Israyeli ekwandiseni uluntu lwamaJuda kwi-West Bank iminyaka emine ubuncinci, ukulungele ukuba "ukwamkelwa [kuya kufezekiswa] kwangoko" kwezi ndawo zithetha ukuhlala phantsi kolawulo luka-Israyeli.
Uxolo akufuneki lunyanzele abantu ukuba basuswe - ama-Arabhu okanye amaJuda - emakhayeni abo, isicwangciso soxolo sithi, "ulwakhiwo olunje olukhokelela kwizidubedube zasekuhlaleni, aluchasani nembono yokuhlalisana.
"Bamalunga ne-97% abantu bakwa-Israyeli kwi-West Bank abazakufakwa kumhlaba odibeneyo wase-Israeli," iyaqhubeka, "kwaye malunga ne-97% yabantu basePalestine kwi-West Bank bazakufakwa kumhlaba odibeneyo wePalestine."
Ngokubhekisele eGaza, i-US “Umbono… ubonelela ngamathuba okwabiwa kwemimandla yasePalestina yakwa-Israyeli kufutshane neGaza apho iziseko zoncedo zingakhiwa ngokukhawuleza ukujongana… nokucinezela iimfuno zoluntu, kwaye eziya kuthi ekugqibeleni zenze ukuba kwakhiwe izixeko ezikhulayo zasePalestine kunye izixeko eziza kunceda abantu baseGaza bachume. ”
Isicwangciso soxolo sifuna ukubuyiselwa kolawulo lwePA kwi-Hamas-Rule enclave.
Ngokumalunga nobukhulu bengingqi, bobabini uMongameli uTrump kunye ne-Nkulumbuso u-Netanyahu ngolwe-Lwesibini bagxininise ukubaluleka kobukho kwi-White House yoonozakuzaku abavela e-United Arab Emirates, Bahrain nase-Oman.
Inene, isindululo senza kucace ukuba uLawulo lukaTrump “luyakholelwa [ukuba] ukuba amazwe amaninzi amaSilamsi kunye nama-Arabhu enza ulwalamano kunye no-Israyeli luza kunceda ukuqhubela phambili isisombululo esifanelekileyo nesinobulungisa kwimpikiswano phakathi kwama-Israel namaPalestina, kwaye kuthintele i-radicals ekusebenziseni le mpixano ukuzinzisa lo mmandla. ”
Ngaphaya koko, esi sicwangciso sifuna ukusekwa kwekomiti yezokhuseleko yommandla eza kuthi ihlole imigaqo-nkqubo yokulwa ubunqolobi kunye nokukhuthaza intsebenziswano yezobuntlola. Esi sicwangciso simema abameli abavela e-Egypt, Jordan, Saudi Arabia nase-United Arab Emirates ukuba bajoyine oogxa bakwa-Israyeli nabasePalestine.
Indlovu enkulu egumbini phambi kwangoLwesibini yayikukuba ngekhe kubekho ukumelwa kwePalestine kwi-White House. Nangona kunjalo, ngaphandle kokubhena okuphindaphindiweyo kuMongameli wasePalestine uMongameli Mahmoud Abbas, icebo loxolo ligxeka kakhulu ubunkokheli basePalestine.
"IGaza kunye ne-West Bank zahlulwe ngokwezopolitiko," uxwebhu luthi. “IGaza iqhutywa yiHamas, umbutho wobugrogrisi oye wagxotha amawaka eerokethi kwa-Israyeli kwaye wabulala amakhulukhulu akwa-Israyeli. Kwi-West Bank, iGunya lasePalestine ligutyungelwe ngamaziko angaphumelelanga kunye nenkohlakalo engapheliyo. Imithetho yayo ikhuthaza ubugrogrisi kunye nemithombo yeendaba elawulwa liGunya lasePalestine kwaye izikolo zikhuthaza inkcubeko yokuxhokonxa.
“Kungenxa yokungabikho koxanduva lokuphendula kunye nolawulo olubi ukuba iibhiliyoni zeedola zichithwe kwaye utyalomali alunakho ukungena kule mimandla ukuvumela amaPalestina ukuba achume. Abantu basePalestine bafanelwe likamva eliqaqambileyo kwaye lo Mbono ungabanceda baphumeze elo kamva. ”
Ngaphambi koLwesibini, uninzi luvumile ukuba iya kuba ngumsebenzi omde ukubuyisela amagosa asePalestina kwitafile yothethathethwano. Ngoku, ngokudityaniswa nekhwelo le-PA lokuqhankqalaza e-West Bank, abahlalutyi baye babhengeza ngokufanayo "iDeal of the Century," njengoko isicwangciso saseMelika sibizwa njalo, sifile ekufikeni kwamehlo kaRamallah.
Nangona kunjalo, uMongameli uTrump wabonakala ngathi unomdla wokuthetha ngqo nabantu basePalestine.
Eyona nto iphambili kwisindululo sakhe kukunyusa i-50 yeebhiliyoni zeerandi kwimali yotyalo-mali ukuba yahlulwe ngokulinganayo phakathi kwe-PA kunye noorhulumente bengingqi yeArabhu- eya kuthi isetyenziselwe ukubonelela abantu basePalestine ngamathuba ezoqoqosho.
“Ngokuphuhlisa amalungelo obunini bepropathi kunye nekhontrakthi, umthetho, amanyathelo okulwa urhwaphilizo, iimarike zemali, inkqubo yerhafu yokuxhasa ukukhula, kunye nenkqubo yeerhafu ephantsi enezithintelo ezincitshisiweyo kwezorhwebo, eli linge libonisa utshintsho kumgaqo-nkqubo kunye notyalo-mali lweziseko ukuphucula imeko yezoshishino nokukhuthaza ukukhula kwecandelo labucala, ”sitsho isicwangciso soxolo.
"Izibhedlele, izikolo, amakhaya kunye namashishini azakukhusela ukufikelela okuthembekileyo kumbane ofikelelekayo, amanzi acocekileyo kunye neenkonzo zedijithali," ithembisa.
Isicwangciso “Umbono” singangcono ngokugqityezelwe ngomnye wemhlathi wokuqala wentshayelelo, othetha intetho yokugqibela yepalamente yenkulumbuso yase-Israel ongasekhoyo u-Yitzhak Rabin, “otyikitye isivumelwano se-Oslo nowathi ngo-1995 wanikela ngobomi bakhe kwinjongo yoxolo.
“Wayecinga ukuba iJerusalem ihleli imanyene phantsi kolawulo lwama-Israyeli, iinxalenye ze-West Bank zinabantu abaninzi abangama-Yuda kunye ne-Jordan Valley zibandakanyiwe kwa-Israyeli, kwaye intsalela ye-West Bank, kunye ne-Gaza, bexhomekeke kuRhulumente wase-Palestina wokuzimela koko yathi iya kuba yinto engaphantsi kombuso.
Uqhubeka esithi, "Umbono kaRabin, yayisisiseko apho iKnesset [iPalamente yase-Israeli] yamkela iZivumelwano zase-Oslo, kwaye ayizange inqatshwe zinkokheli zasePalestine ngelo xesha."
Ngamafutshane, i-US ibonakala ngathi ijikela kumbono odlulileyo ngethemba lokwakha ikamva elingcono, nangona kungenakulindeleka.
Umxholo opheleleyo wesicwangciso soxolo unokujongwa Apha.
Ngu-Felice Friedson kunye no-Charles Bybelezer, kwi-Media Line